To'annaan Zimbaabwee fonqolcha fakkaata jedhe Gamtaan Afrikaa - BBC News Afaan Oromoo
Akkaataa raayyaan waraanaa Zimbaabwee biyyattii to'ateefi prezidaant Roobeert Muugaabee manaa keessatti hidhe kun ''fonqolcha fakkaata'' jechuun Gamtaan Afriikaa (GA) dubbatan.
Hogganaan gamtichaa, Alfaa Koondee, heerri biyyattii hatattamaan akka kabajamu GA gaafata jechuunis dubbataniiru.
Rayyaan warraana biyyatti garuu fonqolcha mootummaa godhameera isa jedhame kana wayita haalan, nageenyi Obbo Mugaabee eegamaa akka ta'e beeksiisuun kan nu tarkaanfii irratti fudhachaa jirru naannoo isaanii kan jiranii fi ''yakkamtoota'' warra ta'an irratti jechuun dubbataniiru.
Gochaan kun obbo Mugaabee bakka bu'uun walqabatee waldhaansoo namoonni wal irratti goodhaa turan hordofee kan ta'e ture.
Itti aanaa prezidaant kan turan Emeerson Mnaangaagwaa torban darbe keessa aangoo irra ar'amuun, haadha warraa Obbo Mugaabee Greesiin kan aangoo dhaaltu gochuuf ture jedhama - kunis angaawoonni raayyaa waraanaa gurguuddoon akka gara isaanii goran taasise.
Namni waggaa 93, Obbo Mugaabee biyyattiin kolonii Inglizii jalaa bara 1980 bilisummaa ishee erga argatte jalqabanii siyaasa biyyattii dhuunfatanii turaniiru.
Prezidaantii Giinii fi hogganaa GA kan ta'an Obbo Koondeen haala biyyatti keessatti ta'a jiru ilaalchisee waraanni Zimbaabwee ''kanaan duras aangoo fudhachuuf yaaleera'' jechuun deebi kennaniiru.
Gamtaan Afriikaa haala jiru irratti ''yaaddoo guddaa qaba'' kanaafis ''jaarmiyaalee seeraa biyyattiif deggeerssa guutu akka godhamuuf'' ibsa isaanii keessatti dubbataniiru.
Bara 2013 keessa fonqoolcha mootummaa irratti kan geggeesite Misriin GA keessaa akka baatu taateetti. Tarii raayyaan waraanaa Zimbaabwees kun akka irra hingeenye jechuuf tarkaanfiin isaan fudhatan akka fonqolcha hintaane falmachuu irratti argamu, jechuun Zimbaabweetti kan argamtu hojjettuun BBC Aann Sooy eerteetti.
Ta'iiwwan maal fakkaatu?
Muddamaa fi jette jettee guyyootaaf ture booda, waraanni qabeenyaa mootummaa kan ta'e miidiyaa tamsaasa ZBC Kibxata galgala to'ate.
Qondaalli waraana Zimbaabwee, Meejar Jeneeral Sibusisoo Mooyoo, midiyaa irratti dhihaachuun waraanni kan irratti xiyyeefatu ''yakkamtoota'' kan ta'anii fi naannoo prezidaant Muugaabeetti kan argaman irratti akka xiyyeefate dubbatan.
Itti dabaluunnis ''kun fonqoolchaa mootummaa kan waraanaan raawwatame miti,'' jechuunnis dubbataniiru.
Itti dabaluunis Obbo Mugaabee fi maatiin isaaniis ''haala gaarii keessa akka jiranii fi nageenyi isaaniis mirkana'adha'' jechuun dubbataniiru. Tarkaanfii waraanni kun fudhatu ilaalchisee eenyu hogganaa akka ta'e garuu waanti if ta'e hinjiru.
Wayita sanaA eegaluun, konkoolattoonni waraanaa daandii magaalaa Haraaree argamuu jalqaban, magaalattiI gara kaabaa naannoo Obbo Mugaabee fi qondaaloonni mootummaa jiraAtan irraas dhukaasi dhagahamuU jalqabe.
Prezidaantiin Afriikaa Kibbaa Jaakoob Zuumaa irra dhagahame immoo: ''Preezidaant Zuumaan ganama har'aa prezidaant Mugaabee haasa'uun akka mana isaanii keessatti hidhaa jala jiran, garuu immoo nagaa akka ta'an dubbataniiru.''
Bakki isaan jiran hanga yoonaatti ifatti kan hinbeekamiin Prezidaant Mugaabee irraas ta'e haadha warraa isaanii Grees Mugaabee irraa hanga yoonaatti kallattiin yaadni kenname hinjiru.
Akkamiin kan irra gahame?
Walirratti ka'uu haadha warraa Obbo Mugaabee fi Obbo Mnaangaagwaa gidduutti dhalateen, paartiin aangoo irra jiru Zanu-PF akka gargar bahan godhe.
Akka inni aangoo irraa ari'amuuf gaaffii aadde Grees gooteenis Obbo Mnaangaagwaan itti aanaa prezidaantummaa irra ari'aman.
Haa ta'u malee, qondaalli olaanaa waraanaa kan ta'an Jeneraal Konstaantiinoo Chiweengaa ari'ama Zanu-PF keessatti ta'aa jiru hambisuuf waraanni keessa galuuf akka qophii ta'e dubbatan.
Gen Chiweengaan Obbo Mnaangaagwaa waliin michuu cimaa fi bara 1970'oota keessa haacuuccaa fi bittaa warra Inglizii hambisuuf kan qabsaa'aa turanidha.